Intambo ye-USB C etshaja ngokukhawuleza iza kwi-Apple Watch entsha | IPhone iindaba
Intambo ye-USB C etshaja ngokukhawuleza iza kwi-Apple Watch entsha
UJordi Gimenez | 15/09/2021 20:00 | Apple Watch
KwiCupertino bayaqhubeka nokuxhathisa ekuphunyezweni kwezibuko le-USB C kwi-iPhone, sonke sijonge phambili ekuphunyezweni kwayo kodwa akukho nto ... Kuya kuba kuhle ukuba nezibuko elinye kuzo zonke izixhobo zeApple kodwa okwangoku Ukufika kwe-USB C kuyasebenza kuzo zonke iimveliso kwaye kule meko yayili-Apple Watch Series 7, ikwakhona nangokutshaja ngokukhawuleza.
Ewe, iimodeli ezintsha ze-Apple Watch zongeza inkqubo yokutshaja ngokukhawuleza apho umsebenzisi anakho yi-80% yobomi bebhetri kwimizuzu nje engama-45. Oku kuthetha ukuba ngoku iiwotshi ezintsha zivumela ukuba ifowuni ihlawuliswe ngokupheleleyo i-33% ngokukhawuleza kuneemodeli zangaphambili.
Ukuzimela kakuhle kunye nokutshaja ngokukhawuleza nge-USB C
Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba ngoku iApple Watch entsha ibonelela ngobomi bebhetri ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-18 ngokwe-Apple uqobo kwaye yongezwe kwisantya sokutshaja ngentambo entsha ye-USB C sine-combo efanelekileyo. Kwelinye icala, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le ntambo ye-USB C ithengiswa ngokwahlukeneyo kwaye iyahambelana ngokupheleleyo nayo yonke iApple yokujonga ukuya kuthi ga ku-1 kodwa awuzukubiza ngokukhawuleza kubo.
Ukutshaja iApple Watch ngumoya ovuthuzayo. Kwaye kuye kuthi ga kwi-33% ngokukhawuleza kwi-Apple Watch Series 7, enokufikelela kwi-80% yentlawulo malunga nemizuzu engama-45. Kufuneka usondeze isinxibelelanisi kufutshane nobuso bewotshi kwaye iimagnethi zikhathalele yonke into. Yinkqubo etywiniweyo ngokupheleleyo ekungekho nxibelelwano kuyo. Iluncedo olukhulu nayo, kuba awudingi nolungelelwaniso olugqibeleleyo. Ukutshaja ngokukhawuleza kuhambelana kuphela neApple Watch Series 7. Ezinye iimodeli zithatha ixesha eliqhelekileyo.
Intambo entsha yamagnetic ekhawulezayo yokutshaja ngesixhobo se-USB C seApple Watch Inobude be-1 m kunye nexabiso kwivenkile ye-Apple yee-euro ezingama-35. Okwangoku ngelixa sibhala eli nqaku, ukuba uthenga ikhebula ngoku, izakufika nge-17 kaSeptemba, sicinga ukuba isitokhwe siza kukhula iiveki ukuthunyelwa kwangoko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Intambo ye-USB C etshaja ngokukhawuleza iza kwi-Apple Watch entsha
I-Mini Mini entsha, i-Apple's mini ihamba ngePro
I-iPhone 13 Pro kunye ne-iPhone 13 Pro Max zabelana ngeekhamera ezifanayo